Ukuqonda Nokunqoba Izintambo Ze-Inthanethi - I-Casino Online Amakhodi Amakhodi
Ukuqonda nokuwina ama-Slots e-intanethi
Posted on October 18, 2018 Umbhali Andrew Amazwana Off kokuthi Ukuqonda Nokunqoba Ku-Online Slots
Enye yezinto ezinkulu, futhi ethandwa kakhulu, izitayela ezenzakalweni ze-inthanethi kufanele zibe yizintambo. Akulula ukudlala, anganikeza izinkokhelo ezinkulu futhi kunezinhlobonhlobo zezintambo ze-intanethi ongakhetha kuzo ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu unethuba lokuthola nokudlala izintandokazi zakhe.
Ngakho yiziphi izinto I-UK engcono kakhulu yokudlala, iphi i-casino e-intanethi engcono kakhulu yokuyidlala nayo futhi yiziphi amasu angcono ongawasebenzisa uma udlala izintambo ze-intanethi? Qhubeka ufunda futhi ubone ukuthi ungayiqonda kanjani futhi uyinqobe ezindaweni eziku-intanethi.
I-Best Online Slots
Le themed slot yaseGibhithe ifaka ama-reels 5 ngemigqa ye-3 kanye nemigqa yokukhokha ye-10. Ukubheja kusukela ku- $ 0.01 kuya ku- $ 2 lilinye futhi abadlali bangabheja kuze kufike ezinhlwini ezinhlanu kulayini ngamunye okhokhelwayo.
I-Rhino ehluphayo inikeza izindlela ze-4,096 zokuwina ukwenza i-slot enhle kakhulu e-inthanethi. Ukuphakama kwebanga kuya kusuka ku-$ 0.40 futhi kuya phezulu ku-$ 120 ngehora futhi kunezindlela eziningi zokuthola ama-spins wamahhala, kufaka phakathi ukuthola idayimani le-3 elikunika ama-spins amahhala we-8, noma i-4 ezokunika i-spin 15 yamahhala.
Ngokusekelwe ku-movie, i-300, i-300 Shields isethwe ensimini yekolweni ngaphandle kwe-Sparta. Ihlanganisa imigqa ye-25 ekukhokheni kwe-5 × 3 kodwa umdwebo omkhulu wezinguquko ze-300 yi-1,000x ukunqoba ngezindawo ezinhlanu zasendle kanye nokuwina kwe-100x (izikhathi zakho zonke ukulinganisa kwakho) ngezihlangu ezinhlanu ezihlakazekile.
Dead Alive noma
Le slot yasentshonalanga enesihloko esikhulukazi enikeza ukubuyiselwa kwe-5 ngemigqa ye-3 kanye nemigqa ye-9 ekhokha iyenza ibe yi-slot ephezulu kakhulu enikeza ukukhokha okukhulu. Futhi, isethwe entshonalanga yasendle iphelele ngezigcwelegcwele nezinye ihluzo ezimangalisayo.
I-Casinos e-Best Online ye-Slots
I-Casino.com inikeza ibhonasi ye-£ 400 eyamukelekile kanye nezintambo eziningi, ama-jackpot slots namageyimu we-casino kunanoma iyiphi enye i-casino e-intanethi.
Izimbiza zeLuck Casino
Hlanganisa ukukhushulwa kweviki ngebhonasi yediphozi ye- $ 100 ne-100 spins ibhonasi ku-Starburst futhi unenye yamakhasino weselula we-inthanethi embonini.
I-Casumo Casino inikeza izinhlobo eziningi zemidlalo yokuphromotha, i-slot tournaments kanye ne-giveaways njengoba inikeza umdlalo we-deposit wokuqala we-100% kufika ku-£ 300 + 20 bonus spins.
Indlu ye-Casino inikeza amabhonasi ka-100% kuze kube ngu-£ 500 noma i-50% kuze kube yi-£ 5,000 yokuthi idiphoze ngaphezu kwe-£ 1,000 futhi ibe ngokukhethekile kuma-slots eselula.
Amanye amathiphu on Indlela Yokuphumelela
Phatha i-Bankroll yakho ngokufanele
Elinye lamaqhinga abaluleke kakhulu ukudlala izintambo ze-intanethi ukuphatha kahle i-bankroll yakho. Kungakhathaliseki ukuthi uyaphumelela noma ulahlekelwa, ibhange lakho kufanele libheke inombolo yakho eyodwa. Dlala izintambo eziphakathi kwesabelomali sakho impumelelo enkulu.
Balala imigqa yokukhokhela izindleko
Ukwazi nokubala imigqa yakho yokukhokha kubalulekile uma uzophumelela ukudlala izintambo ze-intanethi. Lokhu kuzokusiza ukuba wazi izindleko zangempela zomshini we-slot futhi unikeze i-ROI ephezulu.
Uma udlala izintambo ze-intanethi, unayo izici ezimbili ezibaluleke kakhulu okufanele uzicabange: ukubaluleka kwezimali ozodlala nazo kanye nenani lemali oyodlalayo ekubheja ngayinye. Uma ngabe uzobheja izinhlamvu zemali ze-4 $ 0.50 noma imali eyodwa ye-$ 2, imiphumela yayizohluka kakhulu njengoba umphindiseli ophakeme ehamba ngemali yezinhlamvu ozithatha ukudlala. Ukubheja inani elikhulu lemali kuzoqinisekisa ukuthi unethuba elingcono lokuwina.
Uma ujabulele lesi sihloko, sicela ukhululeke ukuwabelana ngawo kumasayithi wakho ozithandayo wezokuxhumana.
Top 10 Kuhle Europe Amakhasino Online 2018:
Google 888 Casino
Google bWin Casino
Google 777 Casino
100 osebenzisa khulula eCasumo Casino
Dlala i-Casumo Casino
Google Party Casino
Google Jackpot City Casino
Google Casino Com
Google SlotoCash Casino
Google WinkSlots Casino
Google SpinPalace Casino
Google Mansion Casino
Google SlotsHeaven Casino
Top 10 Kuhle USA Amakhasino Online 2019:
Amabhonasi wekhasino amasha akukho ibhonasi yediphozithi:
95 osebenzisa free at Miami Club Casino
I-40 mahhala ayikho ibhonasi yephophozi ePolo Casino
I-150 yamahhala e-IntraGame Casino
I-45 mahhala e-Hermes Casino
I-155 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Spin Palace Casino
I-105 ayikho ibhonasi yediphozithi lapha LAPHA Casino
I-50 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-IntraGame Casino
I-145 yamahhala i-spin casino e-SuperLenny Casino
I-70 ayikho ibhonasi ye-deposit e-Epoca Casino
I-130 ayikho ibhonasi ye-deposit kuMnu. Mobi Casino
I-160 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-EuroFortune Casino
I-175 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi e-Ladbrokes Casino
I-65 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Florijn Casino
I-130 yamahhala i-spin bonus ku-Captain Cooks Casino
I-140 yamahhala e-Gaming Club Casino
I-60 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti e-Dhoze Casino
I-125 yamahhala i-casino ku-Play Vivid Casino
I-55 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-BingoSKY Casino
I-170 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Slot Madness Casino
I-165 yamahhala e-spin bonus ku-Lucky Nugget Casino
I-175 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Florijn Casino
I-75 yamahhala e-spin bonus e-Music Hall Casino
I-75 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yase-African Palace Casino
I-55 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Always Vegas Casino
bo vegas akukho khodi yebhonasi yediphozithi